Musangano weUNWTO European Commission unosanganisira nhengo yeWTN Board Aleksandra Gardasevic-Slavuljica anomiririra Montenegro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Musangano weUNWTO European Commission unosanganisira nhengo yeWTN Board Aleksandra Gardasevic-Slavuljica anomiririra Montenegro
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Greece Kupwanya Nhau • misangano • nhau • vanhu • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau
Komisheni yedunhu reUNWTO yakapedza musangano wayo muAthens. World Tourism Network bhodhi nhengo inomiririra Montenegro vakaratidza kukosha kwenzvimbo yeBalkan muindasitiri yepasirese yekushanya neyekushanya.
Nhengo dzeEuropean dzeWorld Tourism Organisation (UNWTO) dzakasangana muAthens kumusangano we66th weCommission for Europ.e
Gurukota reGreek Kriakos Mitsotakis uye Mutevedzeri weMutungamiri weEuropean Commission Margaritis Schinas vaivepo.
Saudi Arabia yakakokwa neGirisi kuti iende kumusangano weEuropean ichangovhura nzvimbo yenharaunda muSaudi Kingdom.
Aleksandra Gardasevic-Slavuljica, Sachigaro we World Tourism Network (WTN) Balkan Inofarira Boka, vakapinda musangano weUNWTO unomiririra Montenegro.
Iyo UNWTO Europe Commission yakasangana ichipesana neiyo kumashure kweiyo yazvino UNWTO dhata uye maonero pane epasirese kushanya uye muchirevo chekuenderera kwekufona kwe kubatana kutanga patsva kushanya kutsigira kwete chete chikamu asi zvakare yakawedzera hupfumi uye magariro kugadzirisa.
"Europe ine mukana wekutungamira kutanga kwepasi rose kwekushanya, zvakachengeteka uye zvine mutsigo," akadaro UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili. "Rutsigiro rwezvematongerwo enyika urwo rwatiri kuona nhasi humbowo hwekukosha kwezvekushanya kupfuura chikamu chedu, kuvaka ruvimbo uye kuita kuti nzanga nehupfumi zvifambe zvekare," akawedzera.
Izvi zvakatsigirwa nemutungamiriri wehurumende, Kriakos Mitsotakis, uyo akarumbidza hutungamiriri hweUNWTO uye akasimbisa kuzvipira kwenyika yake kutungamira zviwanikwa kutangazve kushanya kwakasimba. Komisheni yakanangisa pamatanho anoshanda ari kutorwa neUNWT kutungamira kutangazve kwekushanya uye kutsigira mamirioni emabasa nemabhizinesi muEurope ese anovimba nechikamu. Izvi zvinosanganisira zvakasimbiswa kudyidzana pakati peUNWTO neEuropean Bank yekuvakazve nekusimudzira. Sezvakatsanangurwa pamusangano, masangano maviri achashanda pamwechete kuendesa rubatsiro rwehunyanzvi hwakagadzirirwa kudzosera hupfumi munyika dzinoverengeka dzeEurope, kusanganisira Greece, pamwe neCroatia, Montenegro, Georgia, Tukey, neTurkmenistan.
Kukosha kwekushanya kumararamiro eEurope kwakazivikanwa zvakare neMutevedzeri weMutungamiriri weEuropean Commission. Margaritis Schinas, uyo akambotora chikamu muUNWTO's Yepasi Pose Tourism Dare Komiti, inomiririra European Commission, sehurumende pamwe nevatungamiriri vehurumende nevemasangano akazvimirira vanoshanda pamwechete kugadzirisa zvinokonzeresa denda iri mukushanya nekuronga kubatanidzwazve kwechikamu.
Kubata uye sachigaro Komisheni, Gurukota rezvekushanya kweGreek, Harry Theoharis, akasimbisa iyo nyika yakasimba yezvematongerwo enyika uye inotsigira rutsigiro rweUNWTO uye nekushanya kwepasirese kubva pakutanga kwedambudziko. Greece, imwe yenzvimbo dzepasi rose dzekushanya, yanga iri nhengo inoshingaira yeUNWTO's Global Tourism Crisis Committee kubva pakutanga kwedenda. SeSachigaro weTechnical Group, Gurukota Theoharis vatungamira vatungamiriri vehurumende nevemakambani mukugadzira mhinduro dzinoshanda kumatambudziko makuru arikusangana nekushanya, kusanganisira maprotocol akabatana ekutanga patsva kweichi chikamu, kwete muEurope chete asi nepasirese.
Pasi pehutungamiriri hweGurukota, Gurukota rezveKushanya reGreek rakazivisa kuvakwa kwenzvimbo yekutanga yakapihwa kuyera kusimudzira kwekusimudzira kwemahombekombe uye kwekushanya kwemakungwa muEastern Mediterranean, nekubatana kweUNWTO. Iyo yekutsvagisa uye yekutarisa nzvimbo ichave yakavakirwa paYunivhesiti yeAegean uye ichatora nekuongorora data rine chekuita nezve zvakatipoteredza, hupfumi, uye magariro kukanganisa kwezvekushanya.
Musangano uyu wakapedzisa nesarudzo uye mazita ezvinzvimbo mukati memitumbi yakati wandei yeUNWTO. Nyika shanu dzakasarudzwa kunomiririra Europe kuUNWTO Executive Council (Armenia, Croatia, Georgia, Greece, neRussia Federation). Pakati peizvi, Hungary neUzbekistan vakasarudzwa sevamiriri veMutevedzeri weMutungamiri weGeneral Assembly, uye Azerbaijan neMalta vakasarudzwa kuti vashande senhengo dzeCredentials Committee. Pakupedzisira, Girisi yakasarudzwa kuti ishande sachigaro weUNWTO Commission kuEurope, neBulgaria neHungary dzakasarudzirwa nzvimbo dzayo mbiri dzeVice Sachigaro. Nhengo dzakasarudza Armenia kuti iite musangano unotevera weUNWTO Commission yeEurope.